Muxaadaro la magac baxday “Sixidda Afkaarta qalloocan oo uu jeediyay” Sh. Axmed C/Samad (Dhageyso) | Somali Mirror	You need flash player
Nadwado Muqdisho loogu qabtey Odayaasha Dhaqanka. Qarax Qofkii sidey ku dhintey Muqdisho. Mu’asasada Safa oo Dowro labaad ka bilowdey Muqdisho. Mid kamid ah dhagarqabayaashii dhacay xawaaladda Kaah oo maanta lagu qabtay G/Kacyo War degdeg ah: Isuduwaha amniga gobolka Mudug oo caawa lagu dilay magaalada G/kacyo Kufsiga: Dhibaato Dan laga leeyahay!! Sh. Bashiir oo ka badbaaday qarax loo dhigay Iskoolada luqadaha sidee u hormarinaa? Qalinkii: Sh. Axmed C/samad Nadwo ku aadan isaga digiga waxyaabaha lagu halaagsamo oo ka dhacdey Muqdisho. (Sawiro) Ciidamo ka tirsan AMISOM oo Baydhabo la dajiyey Muxaadaro la magac baxday “Sixidda Afkaarta qalloocan oo uu jeediyay” Sh. Axmed C/Samad (Dhageyso)
Published on January 25, 2012 by SomaliMirror · 3 Comments · Sh. Axmed C/Samad oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku sugan oo Paltalk-ga marti ugu ahaa Qolka Somali Al-taqwaa Islamic Network iyo khadka telefoonka 114 ee dalalka waqooyiga Ameerika, ayaa ka jeediyay muxaadaro aad u qiima badan oo uu kaga hadlay afkaaraha qalloocan ee muuqaalka diineed loo yeelay iyo nasiixooyin ku aaddan sidii loogu toosnaan lahaa jidkii salafka, loogana badbaadi lahaa inxiraafaatka diineed ee caqiido iyo hab-dhaqanba leh ee dad badan lagu aafeeyay.
Sheekha ayaa muxaadaradiisa isbarbar dhig ku sameynaya tilmaamaha diinteenna xaniifka ah iyo ficillada gurracan ee ay xarakada Alshabaab faraha kula jiraan isagoo nasaa’ix gaar ah u jeediyay da’yarta khayr doonka ah ee ku kadsoomay afkaarahaas qalloocan. Kumannaan dad ah oo ku kala dhaqan dalalka Yurub, Australia iyo waqooyiga Ameerika ayaa ka faa’iideystay muxaadarada Sheekh Amxed kuwaas oo kala socday aaladda Paltalk-ga iyo khadadka telefoonnada.
Halkan hoose ka dhageyso muxaadaradii Sh. Axmed ka jeediyay qolka Altaqwaa iyo khadka 114
Sixidda Afkaarta Khaldan Sh Axmed Cabdisamad No related posts.	Readers Comments (3)
hassan says:	January 25, 2012 at 6:44 pm	Walaal maantasixid keliya loo majooge waa khalad waa jiraanayaa sax waa jiraanayaa qowl Ayaa la rabaa, waxaa iga su’aal ah ducada waxaa loo duceeyaa juyuusha muslimiinta waxaa la habaraa ama inkaar looga ridaa kufaaryta guud ahaan haddaba waa kuwee juyuusha muslimiinta iyo ku faarta ? Ikhwaanii afka keliya laguma difaacee diinta ficil ayay ui baahan tahay waa khaldantahay keliya looma joogo gaalna marna kuuma fekeraayo dantaada
Jaalle Isticmaal magacaaga says:	January 25, 2012 at 9:33 pm	Wa in lo duceyo juyushta musliminta melay joganba, lakin jaysh shaydan o magac islam qatay ducada muslimintu ma ku dhacaysa?. Xasanow ka firso hadada hadalka ula jedo Shabab ma lo duceyo? ogo intay dinta iyo ummada u geysten ba ka badan inta galada kale u geysatay. E labao nin o isku shaqo haya maxa midna logu ducena midna lo habara. Waxay wada mutaysten habaar.
Cali says:	March 29, 2012 at 4:47 pm	Marka waxaan salaamayaa qof kasta oo muslim ah: assalaamu calaykum. Walaalayaal allaah ka cabsada kana fogaada inaad wax ka sheegtaan mujaahidiinta. U nasteexeeya markay khalad sameeyaan una duceeya. Midda kale ninkan al-shabaab yir ciidan shaydaan ninkan ma takfiir baa muxuu mujaahidiinta u gaaleysiinayaa. Towbad keen ayaan dhihi lahaa.